BICHON FRIZE DOG FAMPAHALALANA MOMBA NY ALIKA SY SARY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bichon Frize
Dung the Bichon Frize amin'ny 2 taona
Ny Bichon Frize dia alika kely sy matanjaka. Rehefa tapahina amin'ny seho ilay alika dia manome endrika boribory ny vatana. Boribory kely ny karandohany. Fohy kokoa noho ny karan-doha, ny moka, ary mijanona kely ny fijanonany. Ny maso boribory dia mainty na volontany mainty. Arotsaka volo lava ny sofina. Ny nify dia tokony hihaona amin'ny kaikitry ny hety. Ny tongony dia mahitsy sy salama. Matetika dia esorina ny lalàn'andriamanitra. Ny rambony dia entina ambonin'ny lamosina. Ny palitao roa sosona dia malefaka raha mikasika azy. Ny palitao ivelany dia 7 ka hatramin'ny 4 inci (7-10 cm) ny halavany ary matevina kokoa sy mihosotra kokoa noho ny akanjo ambany matevina. Ny lokon'ny palitao dia misy fotsy, fanosotra, volondavenona na apricot. White no aleony amin'ny peratra fampisehoana. Ny palitao dia hypo-allergenic. Matetika ny tompona biby dia mametaka ny alika amin'ny alika kely alika fikarakarana izay mitovy halava manerana ny vatana. Ny alika dia azo aseho amin'ny akanjony voahidy toy ny poodle na miaraka amin'ny palitao lava sy lava mifangaro amin'ny tongotra sy ny baoty.
Ny Bichon dia alika fotsy fotsy sy malefaka izay tia orinasa olombelona. Manana toe-tsaina mahaleo tena izy, manan-tsaina, be fitiavana, be herim-po ary velona. Ity alika mahafinaritra sy malefaka ity dia tsy bibikely. Izy io dia manana toetra matoky tena sy falifaly izay mora iainana. Ireo alika kely mamiratra ireo dia mora zarina ary tia ny olon-drehetra tsotra izao. Mila olona falifaly izy ireo. Fiaraha-monina voajanahary sy sambatra indrindra izy ireo rehefa ao anatin'ny fianakaviana mitondra azy ireo na aiza na aiza. Ity toetra azo ifandraisana ity dia midika koa fa tsara izy ireo miaraka amin'ny alika sy biby hafa ary tsara miaraka amin'ny ankizy. Ampiasaina ho mpiambina sy hanaovana fikafika, ity karazany ity dia mifaninana sy mankatò. Toy ny karazany kely kokoa, ny Bichon Mety ho sarotra amin'ny vaky trano . Ny lalàna Bichon Frize dia mila lalàna manaraka, ary mametra ny fomban'izy ireo ary tsy mahazo manao. Mila isan'andro koa izy ireo entana an-tongotra . Aza avela hivoatra ity alika kely ity Syndrome kely alika , fitondran-tena entin'ny olombelona izay ahitan'ny alika azy mpitarika kitapo ho an'ny olombelona . Izany dia mety hiteraka ambaratonga maro karazana olan'ny fitondran-tena . ao anatin'izany, saingy tsy voafetra amin'ny, ny fihenan-tsofina mihoa-pampana, fiambenana , fanahiana fisarahana , mikitika, ary manaikitra mihitsy aza. Tsy toetra Bichon ireo, fa ny fihetsika entin'ny fomba itondrana ilay alika. Raha manomboka ho mpitarika ny alika ianao, ary matoky tena tsy tapaka, milamina ary manamafy ny alika, manome kitapom-pandehanana isan'andro, ny alika Bichon dia ho alika tena azo antoka sy azo itokisana.
Haavony: Lehilahy 9 - 12 santimetatra (23 - 30 cm) Vavy 9 - 11 santimetatra (23 - 28 cm)
Lanja: 7 - 12 pounds (3 - 5 kg)
Ny sasany dia mora tohina amin'ny maso, katarakta, aretin-koditra sy sofina, ary aretin-koditra ary vongan-koditra very. Izy ireo dia mety ho mora tohina amin'ny manaikitra parasy.
sisin-tany collie mena heeler mix
Ny Bichon Frize dia afaka mipetraka ao amin'ny trano iray raha toa ka manana fanatanjahan-tena ampy. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary tsy maninona raha tsy misy tokontany.
Alika kely mavitrika ireto izay mila a mandeha isan'andro . Ny lalao dia hikarakara be dia be ny filan'izy ireo manao fanatanjahan-tena, na izany aza, satria ny karazany rehetra dia tsy hanatanteraka ny toetrany voalohany handehanana ny lalao. Ny alika tsy mahazo mandeha an-tongotra isan'andro dia toa mampiseho olana amin'ny fitondran-tena. Izy ireo koa dia hankafy romp tsara amin'ny faritra azo antoka sy malalaka tsy hitarika, toy ny tokotanin-trano mimanda.
Alika kely 1 - 6, 4 - 5 eo ho eo
Ity karazana ity dia tokony hikarakara matetika sy handro isam-bolana. Ny fikolokoloana matihanina dia atolotra isaky ny 4 herinandro. Hetezo manodidina ny masonao sy ny sofinao amin'ny hety maranitra ary diovy be ny maso mba tsy ho voapentimpentina. Alika aseho dia voaravaka hety. Ny vatan'ny alika mpiompy dia mety hokopin-jaza amin'ny herinaratra na dia ny ambin'ny alika aza dia tsy maintsy tapahina amin'ny hety. Ny Bichon dia mandatsaka kely tsy misy volo ary tsara ho an'ireo marary allergy.
Ny Bichon Frize dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-13. Taranaka amin'ny Spaniel rano barety ary ny Poodle . Ny Bichon dia natakalon'ny tantsambo Espaniola eran'izao tontolo izao. Ilay alika taty aoriana dia nanjary ankafizin'ny fitsarana mpanjaka frantsay tamin'ny taonjato faha-16. Tamin'ny taonjato faha-19 dia alika mpitrandraka taova malaza izy io ary mpanao fampisehoana koa. Androany ny Bichon Frize dia mpiara-miasa sy alika fampisehoana voalohany. Ny Bichon Frize dia neken'ny AKC voalohany tamin'ny 1972.
BFCA = The Bichon Frize Club of America
aty miloko shorthaired manondro alemaina
Suzi the Bichon Frize amin'ny faha-5 taonany
Casey the Bichon Frize amin'ny 7 1/2 taona
Marco Jack the Bichon Frize amin'ny 10 volana
Sunny the Bichon amin'ny 19 volana— 'Bichon Frize madio izy ary alika mahafinaritra izay tia ny rehetra ... indrindra ny ankizy!'
Hijery ohatra hafa momba ny Bichon Frize
Bichon Frize sary 1
Bichon Frize sary 2
Bichon Frize sary 3
Bichon Frize sary 4
Bichon Frize Dogs: sary an-tsokosoko voaangona
St Bernard bernese tendrombohitra alika Mix
alika kely sy fotsy pitbull
sary manga Mpanasitrana
jack russell terrier rat terrier mifangaro
sôkôla laboratoara sy ny poodle Mix